Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanalamanga Moramanga : Mampiaiky ny maro ny fanararaotam-pahefan’ny tale jeneraly
Fanalamanga Moramanga : Mampiaiky ny maro ny fanararaotam-pahefan’ny tale jeneraly
Orin’asam-panjakana ny Fanalamanga ao Moramanga. Ny fandraharahana momba ny hazo no asany. Manomboka amin’ny fambolena zanakazo, ny fikojakojana sy fanaraha-maso izany, ny fampiroboroboana ny hazo novolena, ny famakiana hazo amin’ny endriny maro, ny fivarotana izany, sy ny sisa.
Azo ambara fa isan’ny orin’asam-panjakana mihodina sy mandeha ny Fanalamanga, saingy amin’izao fotoana dia sokajian’Ingahy Tale Jeneraly, Rakotonirina Augustin, ho toy ny fananany manokana samirery ny orin’asa amin’ny ankapobeny, miaraka amin’ny volam-panjakana ao, ny fitaovana rehetra ao, ny mpiasa rehetra ao, ka anjakazakany sy ampiasainy ho amin’ny tombontsoany manokana.
Mirotsaka hofidiana depiote ao Moramanga izy amin’izao fotoana ka tena ilibany sy anamparany ny fahefana ny mpiasan’ny orin’asa Fanalamanga ho tsy maintsy manompo azy amin’ny fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana. Mifanindran-dalana amin’izany koa ny fampiasany ny fitaovan’ny orin’asa Fanalamanga, toy ny fiarakodia tsy mataho-dalàna (4×4), sy ny fitaovana hafa. Ny volan’ny orin’asa moa dia tsy hay intsony ny fomba itantanany azy amin’izany.
Refesiny hatramin’ny fitondram-panjakana foibe izay nambarany fa “tsy afaka ny hanala azy amin’io andraikiny io satria namany ny ankamaroan’ireo mpitondra ireo, ary misy mihitsy aza no maka “ecolage” any aminy”. Na ny fitsarana koa aza dia tsy ahatahorany, raha ny filazany, hoy ny akom-baovao. Marihina fa efa any ampelan-tanan’ny Bianco ny antontan-taratasy tokony hifotoran’ny Bianco amin’ny fanadihadiana isan-karazany amin’izay fanamparam-pahefan’Ingahy Tale Jeneraly Rakotonirina Augustin amin’ity orin’asam-panjakana Fanalamanga ity.
Ny mponina ao Moramanga sy ny manodidina koa dia loa-bolana mihitsy fa mihevi-tena sy mitondra tena ho manam-pahefana farantampony ao Moramanga izy ka manindritsindry ny rehetra, mizahozaho ary manambanimbany an’izay tsy manaiky mankato ny sitra-pony.